सात वर्षको बच्चाको कमाई दुई अर्ब ४७ करोड | Ratopati
सात वर्षको बच्चाको कमाई दुई अर्ब ४७ करोड
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर १८, २०७५ chat_bubble_outline0
सात वर्षको एउटा बच्चाले कति कमाउन सक्ला ? तपाईं भन्नुहोला कि यति सानो उमेरमा बच्चाले के नै काम गर्न सक्लान् ?
तर रेयान नामका सात वर्षे बालक युट्युबमा खेलौनाको रिभ्यु गर्छन् र यसको बदलामा उनका आमा–बुवाले राम्रो पैसा कमाइरहेका छन् ।
रेयानले गत वर्ष ११ मिलियन डलरको कमाई गरेका थिए जुन अहिले बढेर २२ मिलियन डलर (दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ) भएको छ ।
युट्युबमा रेयानको भिडियो करोडौंले हेर्छन् । रेयान ट्वेजरिभ्यु नामबाट एउटा युट्युब च्यानल चलाउँछन् ।
सेलिब्रिटीको सूचीमा छ नामः
यो युट्युब च्यानलमार्फत रेयान आफ्ना दर्शकलाई खेलौनाको दुनियाँमा लैजान्छन् ।
फोर्ब्स म्यागजिनले उनलाई सन् २०१७ मा संसारको सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक पाउने सेलिब्रिटीको सूचीमा राखेको थियो ।
सन् २०१छ मा सुरु भएको रेयान ट्वेजरिभ्युको भिडियोलाई अहिलेसम्म १६ अर्ब बढीले हेरिसकेका छन् ।
तर यति चर्चित हुँदा पनि रेयानबारे संसारलाई त्यति धेरै जानकारी छैन । उनी अमेरिकी हुन् भन्ने मात्र जानकारी उपलब्ध छ ।
गत वर्ष वासिङ्टन पोस्टलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा रेयानकी आमाले भनेकी थिइन्, ‘छोरा तीन वर्षको हुँदा युट्युब च्यानल बनाउने सोच आयो । रेयान निकै सानो हुँदादेखि नै खेलौनाको रिभ्यु देखाउने च्यानल निकै हेर्दथे ।’
रेयानकी आमाले आफ्नो पहिचान गोप्य राख्ने शर्तमा भनेकी थिइन्, ‘एक दिन रेयानले मलाई म अरुबच्चा जस्तै किन युट्युबमा छैन भनेर प्रश्न गरे । र त्यतिबेला हामीले हामी यस्तो गर्न सक्छौं भन्यौं । हामी खेलौनाको पसलमा गयौं, एउटा लिगो ट्रेन खरिद गर्यौं र यहीँबाट सुरुवात गर्यौं ।’
रेयानको एउटा भिडियो ८० करोड बढीले हेरेका छन् । सन् २०१५ को मार्चदेखि सुरु भएको युट्युब च्यानलले सन् २०१६ को जनवरी मै १० लाखबढी सब्सक्राइबर्स पायो । अहिले रेयानको च्यानलमा एक करोड बढी सब्सक्राइबर्स छन् ।
एउटा यस्तो गाउँ जहाँ कुरा काट्न बन्देज छ
अनौठो प्रथाः जहाँ आमाको सौता बन्न छोरीलाई बाध्य पारिन्छ
जिउँदो अक्टोपसलाई खान खोज्दा यस्तो आक्रमणमा परिन् युवती...